How to Install VirtualBox !!! VirtualBox သုံးပြီး Windows ပေါ်မှာ Ubuntu/Linux/8/XP တင်မယ် | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
How to Install VirtualBox !!! VirtualBox သုံးပြီး Windows ပေါ်မှာ Ubuntu/Linux/8/XP တင်မယ်
Posted on November 26, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ကျွန်တော်အခု မိမိ Windows ပေါ်ကနေ Ubuntu တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား Windows တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Ubuntu ပေါ်ကနေ Windows တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် VirtualBox ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ဒါကြောင့် VirtualBox ကိုဘယ်လို Install လုပ်ရလဲဆိုတာ ရှင်းပြသွားပါမယ်။ပထမဆုံး Windows ကနေဆိုရင် VirtualBox ဒီမှာနှိပ်ပြီး အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။Linux (or) Ubuntu အတွက်ကနောက်ပိုစ့်တွေမှာဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။Install လုပ်တာနဲ့ မေးလာရင် Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အောက်ကအတိုင်းဆက်သွားပါမယ်။
Next ကို Click လိုက်ပါ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း accept ရှေ့မှာ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကို Click ပါ။
ပြထားတဲ့အတိုင်း ဘာကိုမှမပြောင်းပါနဲ့ Next ကိုပဲဆက်ကလစ်သွားလိုက်ပါ။
Ok click finish .
New virtual machine တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် ပြထားတဲ့ New ကိုနှိပ်ပါ။ install လားမေးလာရင်Next ကို Click လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာ နာမည်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ OS အတွက်ပေါ့။ ပြီးရင် Next ပါပဲ။
ဒီအဆင့်မှာ VirtualBox အတွက်လုံလောက်တဲ့အားပေါ့ 200 Mb လောက်ဆိုရင်ရပါပြီ။ ပြီးရင် Nextဆက်သွားပါ။
Createanew virtual hard drive ပေါ်ကို ကလစ်ပြီး Next နဲ့ဆက်သွားပါမယ်။
Ok click finish.
ဒီအဆင့်မှာတော့ CD/DVD ROM ကနေဆိုင်ရင် Mount the CD/DVD Drive ကိုအမှတ်ချစ်ပေးးပြီးCD / DVD ကနေတက်မယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ အစက်ချပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် Desktop ပေါ်က ISO Imagefile ကနေဆိုရင် အောက်က ISO Imagefile ဆိုတဲ့ပေါ်မှာကလစ်ပါမယ်။ ပြီးရင်အိုကေပါ။ အခုတင်ပြတာက Windows ပေါ်ကနေ Ubuntu ကိုတင်တာက်ုပြတာပါ။ နောက်ထပ် Ubuntu ပေါ်ကနေWindows တင်တာကို ဆက်လက်ပြီးနောက်ပို့တွေမှာရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။
This entry was posted in ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ, နည်းပညာ, Software. Bookmark the permalink.
← Internet Download Manager 6.18 Build7Full With Patch	ကွန်ပျူတာတွေမှာ Task Manager အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ software (procexp) →